Ukudalulwa Kwembonakalo Yabanini Bezindlu baseNW abadilizelwa Osonkontileka babo - i-NJ & NY Real Estate, i-Probate, i-Foreclosure Defense kanye nabameli be-Bankruptcy
Ikhaya / Blog / Ukuqothuka / Ukudalulwa Kwembonakalo Yabanini Bezindlu baseNW bagcotshwa ngosonkontileka babo
September 21, 2017 Ukuqothuka, Ukuvikelwa Kwemboni YeNew YorkShiya amazwanaUDerek Soltis
Khuluma noMmeli Wezokuvikela weNJ uma une-Foreclosed ngenxa Yesivumelwano sakho
Uma ungowaseNew Jersey Homeowner ubhekene nokudalulwa kwemali esekwe kwimalimboleko yokuphuculwa kwezindlu lapho ubuyiswe khona ngusonkontileka wakho manje sekudingeka ukuthi icala lakho lizwakale enkantolo. (Fundza yonkhe indzaba New Jersey Law Journal.) Owesifazane waseBurlington County New Jersey ecaleni lakhe Impahla Ebanjiswayo v. Costa okwaqala eminyakeni eyi-9 edlule lapho inkantolo yaseNew Jersey Appellate iliphindisele icala lakhe emuva kokuqula inkantolo icala lakhe ngemuva kokuthola iqiniso. Lokhu akusho ukuthi maye
Lokhu akusho ukuthi ulinqobile icala lakhe, kepha kuyamvumela ukuthi athi: Umthetho Omusha Wokuphepha Kwabanikazi Abasekhaya beNew Jersey we2009. Lo mthetho uvumela umnini-ndlu oboleke imali ukuze kwenziwe ngcono izindlu ukuthi afake isivikelo esivumayo ngokumelene nosonkontileka uma usonkontileka ehlelele imalimboleko. Lokhu akusizi ngalutho kubaninikhaya abaningi ekuvezweni, noma kunjalo, uma umuntu ebanjwa oqotjhwe usonkontileka lokhu manje kuyindlela yokuzivikela enamandla.
Kulokhu, kuvela ukuthi i-Emigrant Bank ayenzanga lutho olungafanele futhi inkohliso yenziwa ngokuphelele usonkontileka. Icala lakhe nokuzivikela kwakhe kuchithwe ekuqaleni kwesinqumo esifingqiwe, kepha iNkantolo Yezicelo YaseNW ivumela uCosta ukuthi azwakalise ukuzivikela enkampanini ebamba imali nenkampani yetayitela. Inkantolo Yezikhalazo ithe, "Siphetha ngokuthi uCosta wafaka isikhalazo kuye ngezinto zokukhwabanisa kwabathengi ezigunyazwe yi-HOSA. Ngaphansi kwalezo zimo, futhi sicubungule isimemezelo esiqinile seSishayamthetho senqubomgomo ye-HOSA engaphansi… ijaji bekungafanele ukuthi likususe isicelo sakhe mayelana nesinqumo esifingqiwe. "